Muxaadaro Qayim ahayd oo Cinwaankeedu ahaa RUNTA iyo ka fogaashaha Akhlaaqda Xun ee beenta iyo u dhawaanshaha Akhlaaqda wanaagsan ee Runta ayuu Sh. cabdiraxman Shiikh Cumar oo Muslimiinta gaar ahaan Soomalida wada taqaan ka jeediyay Masjidka weyn ee Abubakr ee ku yaallo Seattle,Gobalka Washington ee Wadanka Mareykanka.
Sheikh cabdiraxmaan Shiikh Cumar waxaa uu aad ugu dheeraaday qiimaha runta ay lee dahay iyo sida loogu amaanay Nabigeena SCW akhlaaqda wanaagsan oo ay mudantahay in aynu ku dayano.“Nin baa waxaa lagu yaqaanay in uu been Sheego markii danbe ayuu run sheegay ka dib la rumeysan waayay markaasuu raftay oo yiri War maanta waan raftay ee i rumeysta run ayaan sheegayaaye” ayuu sheekha tusaale u soo qaatay.
Sidoo kale waxaa sheikha uu ku baraarujiyay Dadkii dhageysanayay in ay ka fogaadaan in ay gudbiyaan oo sheegaan wax kastaa oo ay maqlaan waxaan uu tusaale usoo qaatay sheikha xadiiskii NABIGA SCW ee ahaa “Waxaa danbi ugu filan qofka in uu ka sheekeeyo wax kastaa ee uu maqlay”
Sheikh cabdiraxman Sheikh Cumar iyo Culimo la socota ayaa waxaa ay Joogaan masjidka Abubakr si ay halkaasi uga jeediyaan Muxaadaraad uguna faa’iideeyaan Umada Halkaasi ku dhaqan.
Waxaad kaga bogan doontaa Muxaadarada Sheikha oo MP3 ah qaybta hoose waxaana dhawaan idiin soo gudbin doonnaa Insha allah Muxaadarada oo MUUQAAL ah Idinka illaahay.
Hoos ka Daawo Video-ga Muxaadaraadii uu Sh Cabdiraxmaan Sh Cumar Uga hadlay Runta.
Halkan Guji Muxaadarada oo MP3 ah.
Muxaadaraadkan kala Soco